ကိုဗဈကာလမှာ ကံကောငျးစမေယျ့ နိမိတျကောငျး ဘုရားလာဖူးတဲ့ မွှကွေီးပါ - Alinnpya
HomeKnowledgesကိုဗဈကာလမှာ ကံကောငျးစမေယျ့ နိမိတျကောငျး ဘုရားလာဖူးတဲ့ မွှကွေီးပါ
ကိုဗဈကာလမှာ ကံကောငျးစမေယျ့ နိမိတျကောငျး ဘုရားလာဖူးတဲ့ မွှကွေီးပါ
October 2, 2020 AlinnPya Knowledges Comments Off on ကိုဗဈကာလမှာ ကံကောငျးစမေယျ့ နိမိတျကောငျး ဘုရားလာဖူးတဲ့ မွှကွေီးပါ
ကိုဗဈကာလမှာ ကံကောငျးစမေယျ့ နိမိတျကောငျး . ဘုရားလာဖူးတဲ့မွှကွေီးပါ
အကယျ၍ သငျသညျ လကျဖကျရညျဆိုငျ၊ စားသောကျဆိုငျ၊ ကုနျစုံဆိုငျ …စသညျဖွငျ့ ဈေးရောငျးခခြွငျးဖွငျ့ စီးပှားရှာသူတဈဦး ဖွဈသညျဆိုပါစို့ …။နံနကျစောစောဆိုငျဖှငျ့ခြိနျတိုငျးတှငျ အောကျပါနညျးကလေးကို ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ၏ဆိုငျတှငျ ရောငျးပနျးဝယျပနျးပှငျ့လနျးကာ လာဘျရှငျ ဝငျငှတေိုးစပေါလိမျ့မညျ။
ငှစေက်ကူတဈထောငျတနျတဈရှကျကို တဈလက်ခမခနျ့ လေးထောငျ့ပုံလေးဖွဈအောငျ ခေါကျပါ။ ပိုကျဆံကွဲသောအခါမြားတှငျ ခေါကျလရှေိ့ကွသကဲ့သို့ ခေါကျပါ။ ထိုအတိုငျး နှဈခု ပွုလုပျပါ။ထိုတဈထောငျတနျငှစေက်ကူအခေါကျကလေး နှဈခုကို သငျ၏ လကျဝဲဘကျလကျတှငျ ဆုပျထားပါ။ ပွီးနောကျ ‘လာဘျ’ဟု ရရှေတျရငျး ညာဘကျလကျသို့ ပွောငျးလိုကျပါ။ ထို့နောကျတဈဖနျ ‘လာဘျ’ဟု ရရှေတျရငျး ဝဲဘကျလကျသို့ ပွနျပွောငျးလိုကျပါ။
ထို့နောကျ ထိုတဈထောငျတနျ ငှစေက်ကူအခေါကျကလေးနှဈခုကို သငျ၏ ပိုကျဆံသတ်တာ၊ ပိုကျဆံပုံးထဲသို့ ထညျ့ထားလိုကျပါ။ တဈစုံတရာ ရောငျးခပြွီးနောကျ ငှေ ဝငျလာ တိုငျးဝငျလာတိုငျး ထိုတဈထောငျတနျ အခေါကျက လေးမြားဖွငျ့ ဝငျလာသညျ့ ငှမြေားကို ခေါကျ၍ ပါးစပျမှ ‘လာဘျ’၊ ‘လာဘျ’ ဟု ရရှေတျလိုကျပါ။သငျ့အတှကျ တဈနတေ့ာခငျြး တိုး တကျလာသညျကို လကျတှေ့ တှရှေိ့ရပါ လိမျ့မညျ။
သငျ့ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ငှသေတ်ေတာထဲမှာ ထဲ့ထားမိနတေဲ့ လာဘျပိတျစတေဲ့ အရာတှအေမွနျဖယျရှားလိုကျပါ။မိမိအသုံးပွုနတေဲ့ ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ မလိုအပျတဲ့အရာတှထေညျ့ထားမိတဲ့အခါ မကောငျးတဲစှမျးအငျတှဖွေဈပျေါတတျပါတယျ ငှကေုနျကွေးကြ၊ ငှယေိုပေါကျတှမြေားလိမျ့မယျ။
ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုကျမှုတှကွေုံရသလို လာဘျ လာဘ ပိတျ တာတှေ ငှကွေေး အလိမျခံရတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ ။ထို့အတူ ကောငျးသောစှမျးအငျတှဖွေဈစတေတျသညျ့အရာတှကေို သငျ့ပိုကျဆံအိတျထဲမှာထညျ့ထားခဲ့မညျဆိုလြှငျ ငှကွေေး- အဆကျမပွတျဝငျသလို ကနျြးမာ ခမျြးသာ ကာ – ငှကေုနျ ရတဲ့ ငှထှေကျပေါကျတှေ ပိတျပဈလိုကျ နိုငျပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ပိုကျဆံအိတျ(သို့မဟုတျ) ငှသေတ်ေတာထဲမှာ ထညျ့မထားသငျ့တဲ့အရာတှကေတော့ ဘလျေ၊ ပွစော၊ ဟောငျးမြား၊ receipt ဟောငျးမြား (စားရငျးမှတျရနျ ဘလျေတငျရနျ ခနျြထားတာမြိုးမဟုတျတဲ့ပွစော ) ညဈညမျးပုံမြား၊ သဆေုံးပွီးသူမြားပုံ၊ ကွမျးတမျး ရကျစကျသော ပုံမြား (မကောငျးတဲ့ စှမျးအငျမြား ဖွဈစပေါတယျ။)
တိုလီ မိုလီ မှတျစု မြား၊ လိပျစာ ကဒျ အဟောငျးမြား၊ သကျတမျးကုနျနတေဲ့ membership card မြား သုံးမရအောငျ စုတျပွတျ နတေဲ့ ငှစေက်ကူမြား ခေါကျတှနျ့ နတေဲ့- ငှစေက်ကူမြား (ခေါကျနတေဲ့ ပိုကျဆံ ကို ဖွနျ့ထညျ့ပါ။)သှားရညျစာ မုနျ့တှေ နဲ့ ဆေးမြား ဆေးမြား ဟာ- ကနျြးမာရေး ပွသနာကို ထပျချေါပေးနလေို့ ခှဲဆောငျပါ လကျသညျးညှပျ နဲ့ ကပျကွေး အပါအဝငျ- ခြှနျထကျတဲ့ အရာမြား။
ကြှမျးကငျြသော နက်ခတျပညာရှငျ အဆငျ့ ဆရာ၏ အကွံပေးခွငျး မဟုတျသော- အဆောငျမြား၊ ပရိတျခညျြ၊ လကျဖှဲ့ စသညျမြား သီးသနျ့ ထားပါ စသညျတို့ကို ထညျ့မထားသငျ့ပါဘူး ။သငျ့ပိုကျဆံအိတျ(သို့မဟုတျ) ငှသေတ်ေတာထဲမှာ ထညျ့ထားသငျ့တဲ့အရာတှကေတော့ ငှေ၊ ကွေး ဖွငျ့ ပွုလုပျထားသော နိမိတျကောငျး အရာမြား။ အထူးသဖွငျ့- ငှဒေင်ျဂါး ရှငျသီဝလိ ပုံတျော လကျခမြီး မယျတျောပုံ- ရုပျပုံတျော ဖွဈစေ- ကွေး ဒင်ျဂါး ဖွဈစေ.
ဗောဓိညောငျရှကျ (အထူးသဖွငျ့- နှလုံး ရောဂါ ရှိသူမြား အတှကျ) ပငျလယျခရုခှံမြား (စကွာဝဠာ စှမျးအငျကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ )ဆနျစေ့ ၂၁- စေ့ (အငျမတနျ အကြိုးမြားပါတယျ နောကျပိုငျး သီးသနျ့ တငျပေးပါ့မယျ)ဂငျြး ဖကျလေးအနညျးငယျ (ငှကေိုဆှဲဆောငျနိုငျစသေညျ) ကိုထညျ့ထားခွငျးဖွငျ့ကောငျးသောစှမျးအငျတှကေိုဖွဈပျေါ စကောအကြိုးစီးပှားလာဘျလာဘတိုးတကျစပေါတယျ ခငျဗြာ အားလုံး လာဘျရှငျ ငှဝေငျနိုငျကွပါစသေောဝျ ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ကံကောင်းစေမယ့် နိမိတ်ကောင်း . ဘုရားလာဖူးတဲ့မြွေကြီးပါ
အကယ်၍ သင်သည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင် …စသည်ဖြင့် ဈေးရောင်းချခြင်းဖြင့် စီးပွားရှာသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ …။နံနက်စောစောဆိုင်ဖွင့်ချိန်တိုင်းတွင် အောက်ပါနည်းကလေးကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ဆိုင်တွင် ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းကာ လာဘ်ရွှင် ဝင်ငွေတိုးစေပါလိမ့်မည်။
ငွေစက္ကူတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ကို တစ်လက္ခမခန့် လေးထောင့်ပုံလေးဖြစ်အောင် ခေါက်ပါ။ ပိုက်ဆံကြဲသောအခါများတွင် ခေါက်လေ့ရှိကြသကဲ့သို့ ခေါက်ပါ။ ထိုအတိုင်း နှစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။ထိုတစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူအခေါက်ကလေး နှစ်ခုကို သင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်တွင် ဆုပ်ထားပါ။ ပြီးနောက် ‘လာဘ်’ဟု ရေရွတ်ရင်း ညာဘက်လက်သို့ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ထို့နောက်တစ်ဖန် ‘လာဘ်’ဟု ရေရွတ်ရင်း ဝဲဘက်လက်သို့ ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။
ထို့နောက် ထိုတစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူအခေါက်ကလေးနှစ်ခုကို သင်၏ ပိုက်ဆံသတ္တာ၊ ပိုက်ဆံပုံးထဲသို့ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ တစ်စုံတရာ ရောင်းချပြီးနောက် ငွေ ဝင်လာ တိုင်းဝင်လာတိုင်း ထိုတစ်ထောင်တန် အခေါက်က လေးများဖြင့် ဝင်လာသည့် ငွေများကို ခေါက်၍ ပါးစပ်မှ ‘လာဘ်’၊ ‘လာဘ်’ ဟု ရေရွတ်လိုက်ပါ။သင့်အတွက် တစ်နေ့တာချင်း တိုး တက်လာသည်ကို လက်တွေ့ တွေ့ရှိရပါ လိမ့်မည်။
သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထဲ့ထားမိနေတဲ့ လာဘ်ပိတ်စေတဲ့ အရာတွေအမြန်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ် ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ် လာဘ ပိတ် တာတွေ ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ထို့အတူ ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလို ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ – ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်) ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်မထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့ ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊ receipt ဟောင်းများ (စားရင်းမှတ်ရန် ဘေလ်တင်ရန် ချန်ထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ပြေစာ ) ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ (မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။)
တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ ကဒ် အဟောင်းများ၊ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ membership card များ သုံးမရအောင် စုတ်ပြတ် နေတဲ့ ငွေစက္ကူများ ခေါက်တွန့် နေတဲ့- ငွေစက္ကူများ (ခေါက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ဖြန့်ထည့်ပါ။)သွားရည်စာ မုန့်တွေ နဲ့ ဆေးများ ဆေးများ ဟာ- ကျန်းမာရေး ပြသနာကို ထပ်ခေါ်ပေးနေလို့ ခွဲဆောင်ပါ လက်သည်းညှပ် နဲ့ ကပ်ကြေး အပါအဝင်- ချွန်ထက်တဲ့ အရာများ။
ကျွမ်းကျင်သော နက္ခတ်ပညာရှင် အဆင့် ဆရာ၏ အကြံပေးခြင်း မဟုတ်သော- အဆောင်များ၊ ပရိတ်ချည်၊ လက်ဖွဲ့ စသည်များ သီးသန့် ထားပါ စသည်တို့ကို ထည့်မထားသင့်ပါဘူး ။သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်) ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့ ငွေ၊ ကြေး ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နိမိတ်ကောင်း အရာများ။ အထူးသဖြင့်- ငွေဒင်္ဂါး ရှင်သီဝလိ ပုံတော် လက်ချမီး မယ်တော်ပုံ- ရုပ်ပုံတော် ဖြစ်စေ- ကြေး ဒင်္ဂါး ဖြစ်စေ.
ဗောဓိညောင်ရွက် (အထူးသဖြင့်- နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ အတွက်) ပင်လယ်ခရုခွံများ (စကြာဝဠာ စွမ်းအင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည် )ဆန်စေ့ ၂၁- စေ့ (အင်မတန် အကျိုးများပါတယ် နောက်ပိုင်း သီးသန့် တင်ပေးပါ့မယ်)ဂျင်း ဖက်လေးအနည်းငယ် (ငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေသည်) ကိုထည့်ထားခြင်းဖြင့်ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေကိုဖြစ်ပေါ် စေကာအကျိုးစီးပွားလာဘ်လာဘတိုးတက်စေပါတယ် ခင်ဗျာ အားလုံး လာဘ်ရွှင် ငွေဝင်နိုင်ကြပါစေသောဝ် ။
ကွျောငွာတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး ယုနျးလေး နဲ့ ဒါရိုကျတာ ၀ိုငျး တို့ဖိုကျကွပွီ
လမျးထိပျတှငျကလေးတဈ ယောကျကိုရကျစကျစှာစှနျ့ပဈခဲ့တဲ့မိခငျကို တော့ကနြျောတို့တျောတျောကိုအံ့သွပါတယျ